Madasha oo maanta kulan aan caadi ahayn iskugu imaanaya Muqdisho | Kobciye24.com
Madasha oo maanta kulan aan caadi ahayn iskugu imaanaya Muqdisho
Dec 13, 2016 - jawaab
Shir deg deg ah oo looga arinsanayo waxa laga yeelayo Sool iyo Sanaag xubnaha kasoo galaya baarlamaanka cusub ayaa maanta waxaa ka yeelan doona hogaamiyaasha madasha qaran.
Shirkoodi ugu danbeeyay ayaa lagu shaaciyay in 13-ka bishaan ay mar kale kulmi doonan ayna ka arinsan doonan muranada Puntland iyo Somaliland ee xubnaha degaanadaasi laga soo dooranayo.
Shirka maanta ayaa la filayaa in waqti danbe uu ka furmo Muqdisho maxaa yeelay wali waxaanan soo dhamaystirmin madaxdii dowlad goboleedyada ee iyagu go’aamin lahayn masiirka xubnaha Sool iyo Sanaag Barlamaanka kasoo galaya.
Waxa Madashaan ay noqon doonta mid gabi ahaanba lagu soo afjaro muranada taagan ee dhinaca siyaasada ah waxana ugu muhiimsan waxa laga yeelayo aqalka sare ee xubnaha Somaliland barlamaanka kasoo galaya.
15-ka bishaan ayay tahay in la dhaariyo xubnaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo sii guda gali doona diyaarinta howlaha musharixinta u taagan xilka madaxtinimo ee qudbada xiliyada ay jeedin doonan si madaxweynaha cusub doorashadiisa u dhacdo 28-ka bisha.
Madashaan midii ka horeeysay waxaa ka maqnaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland in kastoo wakiilo ay joogeen.
Beesha caalamka ayaan markale ogaaln doonin wax dib u dhac waxana ay horey uga digtay cawaaqib xumida ka dhalan karta hadii sanadka cusub Somalia ay la gasho iyadoo uu waqtigodi dhamaaday hay’adaha dowladda.
Shirkaan ayaa socon doona hal maalin sida la qorsheeyay,ilo ku dhow dhow madaxtooyada ayaa sheegaya in waxa ugu weyn ee la isku haayo ay tahay arimaha Sool iyo Sanaag lana xalin doono.